Haleellaa Taankera Galoo Omaan: Iraan himannaan US taankera boba'aa gubateen walqabatee himattu dhara jette - BBC News Afaan Oromoo
Haleellaa Taankera Galoo Omaan: Iraan himannaan US taankera boba'aa gubateen walqabatee himattu dhara jette
Iraan himannaa US taankera boba'aa Galoo Omaan irratti gubateen walqabatee akka Iraan duuba jirtuutti dhiyeessaa jirtu "gonkumaa kan fudhatama hin qabdnedha" jette.
Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Maayik Pope'oo taankera boba'aa gubateen walqabatee gochi Iraan rafaasisuuf goote oomaa kan miira tuttuquun nama kaasu miti jedhan.
Aanga'aan Ameerikaa kun akka jedhanitti biyyi isaanii qorannoo gaggeessaniin meeshaa haleellaa kana geessisuuf hojiirra oole baraniiru.
Ameerikaan marii Niwikileera Iraan keessaa baate
Ameerikaan 'qoqqobbii jabaa' Iraan irra keesse
Haata'u malee, Iraan gama isheetiin himannaa US kana "kan bu'uura hin qabnedha " jechuun mormiteetti.
Haleellaa doonii bo'baa qabate sanarra ga'eerran kan ka'e namoonni kurnaniin lakkaa'aman baraarfamuu danda'aniiru.
Dooniin haleellaan irra ga'u kun qabeenyuummaan isaa kan Jaappaan yommuu ta'u qarqara Kokuka Courageous wayita jirutti ture.
Ibsa Jimaata baaseen Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniitti Ergamaan Iraan: "Iraan balaa taanekra boba'aa Waxabajji 13 qaqqabe kanaan walqabatee US himataa jirtu kun "gonkumaa kan fudhatama hin qabnedha" jechuun cimsee balaaleffateera."
Iraan mormii kana dhiyeessitee saatii tokko keessatti Wiirtuu Ajaja Waranaa US ammoo viidiyoo yeroo Eegdonni Warraaqasa Iraan fanjii isa hin dho'iin hafe Kokuka Courageous keessaa baasaa jiran agarsiisu gadi dhiiseera.
Halleellaan amma doonii boba'aa Ameerikaa irra ga'e kun erga taakeroonni boba'aa Yunaayitid Arab Imiratis afur haleellaa abbaan isaa hin beekamneen ji'a tokko dura qaqqabeen boodadha. Yeroo sanattis US gocha sanaaf Iraaniin itti gaafatamtuu taasiftus, Iraan garuu waakkattee turte.
Niwukilera Iraan: Maakroon Iraanirratti dhibbaa gochaa jira
Balaa Kamisa darbe kana Galoo Omaanitti qaqqabe kanaan walqabatee gatiin boba'aa addunyaa %4 dabaleera. Sababiin isaas dandiin galaanaa kun karaa boba'aan dolaara miliyoonaan lakkaa'amu darbudha.
Dhaabbanni akka addunyaatti tajaajila fe'insa doonii kennuun beekamu BIMCO jedhamu nakka ibsetti, dhiphinni naannoo sanatti yeroo ammaa "sodaan yeroo qaamonni hidhannoon haleellaa geessisan qabatamaan jiran caalaa yaaddessaa ta'eera."
Kun osoo kanaan jiruu, Ministirri Dhimma Alaa UK, Jermii Haant yoo Iraan dhimma kana keessatti hirmaatteetti ta'e, "baayyee hubannaa malee dubbii hammeessuun nageenyaafi tasgabbii naanoo sana jiru balaaf saaxiludha," jedhan.
Maayik Pompe'oo maal jedhan?
"Akka US qoratetti haleellaa kanaaf Iraan itti gaafatamtuudha," jechuun Waashingiteen keessatti yeroo ibsa kennaan.
"Madaalliin kunis intalijensii irratti kan hundaa'eedha. Meeshaa haleellaa kana qaqqabsiisuuf raawatame sirriitti ilaaluun, ogummaa guddaa barbaachisuuf of eeggannoodhaan taasifame.
Naannoo sanattis qaamni meeshaa akkkasii fayyadamuun haleellaa qaqqabsiisu dhibuun ammoo kan raawwatame Iraaniin akka ta'e mullisa. Kana malees qabeenya akkasi cimaa, bu'a qabeessaafi ol-aanaa ta'e kanaan kan halleellaa qaqqabsiisu qaamni biraa hin jiru."
Obbo Pompe'oon ragaa kana viidiyoon dhiyeessaniiru.
"Haaleellaan kun kan Iraan walitti fufinsaan geessisaa jirtu keessaa isa dhiyeenya kanaa kan ta'eefi Ameerikaafi kanneen fedhiiwwan Ameerikaa irratti taasifamanidha."
Yunaayitid Isteet Iraan irratti qoqqobbii haaraa keesse
Matakkalitti 'namoonni 30 ol ajjeefamaniiru''
''Naasuun iddoo jirutti dogoggorri hin dhabamu''
Aragaawii Bariheerratti haleellaan aggaamame
Biyya warraaqsatti seenaa jirtu